I-China i-1325 i-spindle ezine ngomatshini we-ATC womatshini kunye nabavelisi | JCUT
Ukusika, ukubetha, ukubhoboza, ukukrola (imodeli elula). Ezi nkqubo zine zinokusetyenziselwa ukusika iikhabhathi kunye nokwenza umnyango wekhabhathi. Sebenzisa inkqubo yokutshintsha yesixhobo esizenzekelayo, inkqubo ngokuzenzekelayo iphumeza iimfuno zokuqhubekeka ngaphandle kokungenelela. Ii-spindles ezininzi zisebenza ngaxeshanye, ukuphucula ukusebenza ngempumelelo.
1. Ukusika, ukutyibilika, ukubhoboza, ukukrola (imodeli elula). Ezi nkqubo zine zinokusetyenziselwa ukusika iikhabhathi kunye nokwenza umnyango wekhabhathi. Sebenzisa inkqubo yokutshintsha yesixhobo esizenzekelayo, inkqubo ngokuzenzekelayo iphumeza iimfuno zokuqhubekeka ngaphandle kokungenelela. Ii-spindles ezininzi zisebenza ngaxeshanye, ukuphucula ukusebenza ngempumelelo.
2. Ifakwe itafile ye-adsorption yetafile, impompo inokulungisa ngokufanelekileyo izixhobo zeesayizi ezahlukeneyo, kwaye isiphumo se-adsorption silungile. Akukho sidingo sokulungisa ngesandla iiplate, eziphucula kakhulu ukusebenza kakuhle komsebenzi.
3. Ifakwe i-servo motor, iigiya zokuchaneka okuphezulu kunye ne-rack drive engeniswayo, eyenza ukuba umatshini usebenze ngokuzinzileyo, ngengxolo ephantsi, isantya esikhawulezayo kunye nokuma okuphezulu kokuchaneka. Kwaye inkqubo yokuthambisa ye-othomathikhi inokuzithambisa ngokuzenzekelayo kwaye ioyile ngokwexesha lokuqinisekisa ukugcwala kwesitayile sesikhokelo sesaladi kunye nokwandisa ubomi benkonzo yomatshini.
4. Isixhobo somatshini samkela isakheko esikhulu sogonyo lobushushu kunyango oluphezulu lweqondo lokuqinisekisa ukuguquguquka okuncinci, ukuqina okuhle, amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, kunye nokusetyenziswa kwexesha elide ngaphandle kokudidiyelwa, intshukumo yomdaniso, ukubandakanywa komzimba, ukuqina kunye nokuqina. Ukusetyenziswa kwesigama ngaphandle koncedo.
5. Sebenzisa inkqubo yokutshintsha yesixhobo esizenzekelayo, inkqubo ngokuzenzekelayo iphumeza iimfuno zokuqhubekeka ngaphandle kokungenelela. Ii-spindles ezininzi zisebenza ngaxeshanye, ukuphucula ukusebenza ngempumelelo.
6. Ukusebenzisa imemori yokucima umbane ukuqinisekisa ukuba ukuqhubekeka kungaqhubeka kwimeko yengozi (umpu owaphukileyo) okanye ngemini elandelayo.
Iziko elitshintshayo lokutshintsha isixhobo sematshini lilungele ukusebenza kwemizi-mveliso njengefanitshala yephaneli, iingcango zeekhabhathi, ifenitshala yeofisi, ifenitshala yesiqhelo, kunye nomzi mnyango. Iipleyiti ezisebenzisekayo: iipleyiti ezinobubanzi obuninzi, ibhodi yamasuntswana, iibhodi zendalo, iibhodi ezixineneyo, iibhodi zamaza kunye nezinye iibhodi ezahlukeneyo. Lo matshini unokusetyenziswa kwimizi-mveliso eyahlukeneyo, njengefanitshala yephaneli, iwadiwadi zekhabethe, ifenitshala yeofisi, ifenitshala yesiko, iidesika zekhompyuter, izithethi zokhuni, izixhobo zokhuni zekhitshi, njl njl.
I-Longteng yesizukulwane sesithathu i-R10 yomgca we-ATC + Iintloko ezine ze-cnc router
Indawo yokusebenzela （S * Y * Z）
1220 * 2440 * 200mm （ubude benkxaso 2800 ukwenza ngokwezifiso）
I-GDZ 9KW * 1 + 3.5kw * 3
Izixhobo ezili-12 （ukuxhasa izixhobo ezili-16
UDorna 1500W ukhonze izithuthi
Ukuxhasa ukuqhuba umqhubi wemoto
Isantya sokutshintsha isantya
Inkqubo yeTaiwan LNC
I-TBI yoqobo engama-25 sikwere sikaloliwe
I-TBI yoqobo yama-25slider
I-TBI 2510 I-Screw yeBhola
Intambo ephezulu yokuhanjiswa okukhuselekileyo
Ikhethekileyo kumatshini wokusika
I-35000MM / MIN
Umjikelo wamanzi 7.5KW
Ingxowa kabini 5.5KW
Ulwakhiwo lwesithathu lwe pattt yesakhiwo （ulawulo oluzimeleyo lwekhabhathi）
Ukunyanga ibhedi yokugugisa ubunzima (ukubila kobuso obuhlanu kunye nokujongeka ngokuchanekileyo u-0.02mm)
I-Crossbeam yodonga lombhobho osisikwere kunye netekhnoloji yentsimbi yokuncamathela ebhedini iteknoloji yonke into eyakhiwe kwikholam
Ikhomishini yokusebenza yekhompyuter
Uchungechunge lwekhabhathi yeLongteng patent, itywinwe ngokupheleleyo kwikhompyuter yeekhompyuter
Umsebenzi we-ax ax wemoto, isihlalo sokuxhasa iZ axis motor screw
Uyilo lobunini 50MM ye-adsorption caliber, uqhagamshelo lombhobho wePVC ukutywina kakuhle, musa ukuqhuba iplate
Isixhobo se sensor
Isixhobo sefowuni yokuenzekelayo
Ukuma kwindawo yokondla
Icala eliphindwe kabini kwiphakheji nganye yokubeka isilinda ngearuminiyam strip
Ngokuzenzekelayo ithayile ye-tiles ethe tyaba ngokuthe tye yokutsala ngokungasebenziyo
Isisongelo ngokuzenzekelayo isahlulelo sokudibanisa uthuli kunye nokukhupha uthuli lwesibini.
Edlulileyo: I-ATC iinkuni cnc 1325
Okulandelayo: I-Wood router ye-atc
I-CNC atc inkqubo emine ye-Wood router
Inkqubo emine yoqoqosho yokusika iinkuni iR4